Planet Mercury: njirimara, nha, okpomọkụ na ịmata ihe | Network Meteorology
Inglaghachi na nke anyị Usoro anyanwụ, anyị na-ezute mbara ala asatọ ahụ na satịlaịtị ha na kpakpando anyị Anyanwụ. Taa, anyị bịara ikwu maka mbara ụwa pere mpe nke na-agba gburugburu Sun. Etwa Mercury. Na mgbakwunye, ọ bụ nke kacha nso niile. Aha ya sitere na onye ozi nke chi ma amaghi ya mgbe amachara ya. Ọ bụ otu n'ime mbara ala ise a pụrụ ịhụ nke ọma site na Earthwa. O megidere ụwa Jupita ọ bụ nke kasị nta n’ime ha niile.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata na omimi a na-akpali mbara ala, a post anyị ga-agwa gị ihe niile todo
1 Etwa Mercury
5 Ọchịchọ ịmata nke ụwa Mercury
N'oge ochie echere ya na mbara ala Mercury na-eche Anyanwụ ihu mgbe niile. N'ụzọ yiri nke ahụ na ọnwa na ụwa, oge ntụgharị ya yiri oge ntụgharị. Ọ ga-ewe ụbọchị 88 iji gbaa anyanwụ gburugburu. Agbanyeghị, na 1965, ezigara puls na radar nke ọ ga-ekwe omume iji chọpụta na oge ntụgharị ya bụ ụbọchị 58. Nke a na-eme ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke oge ya ntụgharị okwu. A na-akpọ ọnọdụ a orbital reson.
Dika obu mbara ala nke nwere oke ma obu pere mpe karia nke uwa, o mere ka ya na Sun nso di nso. O nwetara udi nke mbara ala pere mpe nke asatọ n'ime sistemu nke igwe. Na mbụ, Pluto bụ onye pere mpe, mana mgbe ọ gụrụ ya dị ka planetoid, Mercury bụ onye nnọchi.
N'agbanyeghị obere ya, Enwere ike ịhụ ya na-enweghị teliskop site na ụwa n'ihi ịdị nso ya na Sun. O siri ike ịchọpụta n'ihi nchapụta ya, mana enwere ike ịhụ ya nke ọma na mgbede na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ yana enwere ike ịhụ ya n'ụzọ dị mfe na mbara igwe.
Ọ bụ nke otu mbara ala dị n’ime. Ihe mejuputara ya bu ihe translucent na okwute di iche-iche. Ogo nke ogige ahụ niile yiri nnọọ. Ọ nwere njirimara dị mkpa karị dị ka mbara ala Venus. Ma ọ bụ mbara ala nke na-enweghị satịlaịtị eke na-agbagharị gburugburu ya.
Elu ya bụ nkume siri ike. N'ihi ya, ya na itwa ọ bụ akụkụ nke mbara ala anọ dị egwu na mbara igwe. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, ụwa a anọwo n'enweghị ọrụ ọ bụla ruo ọtụtụ nde afọ. Elu ya yiri nke Ọnwa. Ọ nwere ọtụtụ craters sitere na nkwekọrịta na meteorites na comets.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ebe dị larịị ma nwee nke nwere akara yiri nke ugwu. Ha nwere ike ịgbatị ọtụtụ narị kilomita na narị otu narị kilomita wee ruo elu otu maịl. Isi nke mbara ala a Ọ bụ nke ọla ma nwee okirikiri nke ihe dịka kilomita 2.000. Studiesfọdụ ọmụmụ na-akwado na etiti ya bụkwa iron iron dịka nke ụwa anyị.
Banyere ogo nke Mercury, ọ dị ntakịrị karịa Ọnwa. Ntugharị ya kachasị ọsọ na sistemụ igwe niile n'ihi na ọ dị nso na Sun.
N'elu ya bụ ụfọdụ usoro nwere akụkụ na-egosi na nchekwa dị iche iche. Somefọdụ craters dị obere ma mmetụta jagoro na-apụtawanye ìhè site na mmetụta nke meteorites. O nwere nnukwu efere nwere ọtụtụ mgbaaka na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osimiri ndị na-asọ mmiri.
N’etiti cater nile ahụ niile enwere nke na-apụ apụ maka ya size a na-akpọ Carlori Basins Mgbidi ya dị kilomita 1.300. Ndagwurugwu nke nha a ga-ebute ihe ọkụkụ nke ruru 100 kilomita. N'ihi mmetụta siri ike na-aga n'ihu nke meteorites na comets, a na-akpụ mgbanaka ugwu ndị dị elu ruo kilomita atọ. N'ịbụ obere mbara ala dị otú ahụ, nkwekọrịta nke meteorites mere ka ebili mmiri na-aga na nsọtụ ọzọ nke ụwa, na -emepụta mpaghara ala gbagwojuru anya. Ozugbo nke a mere, mmetụta ahụ kere osimiri nke lava.
O nwere oke ugwu di elu nke emeputara site na ikpo oku na iwedata nha nke otutu kilomita. N'ihi nke a, e hiwere okike jikọrọ ọnụ nke nwere ugwu dị ọtụtụ kilomita ogologo na ogologo. Akụkụ dị elu nke mbara ala a kpuchie na mbara ala. Nke a na-akpọ ndị ọkà mmụta sayensị na mpaghara intercrater. A ghaghi iwu ha mgbe mmiri nke lava na-eli ebe ochie.
Banyere ọnọdụ okpomọkụ, a na-eche na ịbịaru nso na Sun bụ nke kachasị mma. Otú ọ dị, nke a abụghị eziokwu. Ọnọdụ okpomọkụ ya nwere ike iru ogo 400 na mpaghara kachasị ọkụ. Site n'inwe nwayọ nwayọ n'onwe ya, ọ na-eme ka ọtụtụ mpaghara mbara ụwa kpuchie ya site na ụzarị anyanwụ.
Ọnọdụ okpomọkụ ha dị iche iche, ha nwere ike ịga n’agbata -183 Celsius n’abalị na 467 Celsius n’ụbọchị, nke a mere Mercury ka ọ bụrụ otu n'ime mbara ala kachasị ekpo ọkụ na sistemụ Solar.
Ọchịchọ ịmata nke ụwa Mercury
A na-ahụta Mercury mbara ala nwere oghere kachasị na Mbara Igwe. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ nsogbu na ịsụ ngọngọ nke ọtụtụ comets na asteroid na nke ahụ metụtara ya. A na-akpọ imirikiti ihe omume ndị a na mbara ala aha ndị ama ama na ndị edemede ama ama.
Nnukwu ndagwurugwu nke Mercury nwere, a na-akpọ Caloris Planitia, nke a nwere ike tụọ ihe dịka 1.400 kilomita na dayameta.
A pụrụ ịhụ ụfọdụ ebe dị n'elu Mercury na ihu adịghị mma, nke a bụ n'ihi nhụjuanya nke mbara ala mere mgbe isi dị jụụ. Nsonaazụ nkwekọrịta nke ụwa ka isi ya jụrụ.
Iji nwee ike idebe Mercury site na ,wa, ọ ga-abụ na mgbede, ya bụ, tupu ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ozugbo ọdịda anyanwụ.
Na Mercury ị nwere ike ịhụ ọwụwa anyanwụ abụọ: Onye na-ekiri ihe na mpaghara ụfọdụ nwere ike ịhụ ọmarịcha ihe a nke Sun na-apụta na mbara igwe, na-akwụsị, na-alaghachi ọzọ site na ebe ọ hapụrụ, wee na-ebili ọzọ na mbara igwe iji gaa n'ihu njem ya.
Site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara ala a dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Mercwa Mercury